About Us - Ningbo WEDAC-Point of Sale Bonisa Co., Ltd
NBN-Cosmetic sha e-Australia
TD Khombisa Pusher for Vitamin Ibhokisi
Okuzenzakalelayo Self-baphokophelele System Imashi
Colorful Khombisa Acylic
Okunye Khombisa Material
Inani ilebula umnikazi ngoba hook
PVC umnikazi ikhadi
Umjovo ebunjiwe Ingxenye
Izidakamizwa self-othomathikhi pusher isibonisi
Yenza-up self-othomathikhi pusher isibonisi
Ningbo WEDAC-Point of Sale Khombisa Co., Ltd. kuyinto nomkhiqizi onguchwepheshe design, ukuthuthukisa kanye esikhiqiza iimfesi esitolo ukubonisa imishini zezinhlobo ezahlukene ezindaweni ezihlanganisa yezimonyo, ezempilo Ande-ugwayi izimboni. Kutholwe e Ningbo esifundazweni Zhejiang, sesiseduze edumile ejulile amanzi port-Beilun port elihlangeneko, ngokuzuza ekuthintaneni zokuthutha inethiwekhi yayo elula.
Kuhloswe ngayo ukuhlinzeka eyodwa-stop service of imishini ukubonisa, thina ikakhulu ukugxila kweluhlaka. Imikhiqizo yethu lihlanganisa kuhlanganise esitolo okudayisa eshalofini pusher & ehlukanisayo ukubonisa uhlelo, POP / system pos, ukubonisa yezimonyo, esitolo / esitolo ukubonisa iKhabhinethi / yokubeka / ibhokisi, ukuveza acrylic, ukubonisa LED, izimpawu, esitolo DIY isibonisi amayunithi & izixazululo njll Futhi izinqubo zethu kule ndawo kuhlanganisa bumbela acrylic, umsebenzi metal (CNC ukugoba, isibhakela, laser cutting), umjovo plastic kanye nomsebenzi lokhuni.
Phakathi naleso sikhathi, thina simunye of the professional kunazo imikhiqizo acrylic nomkhiqizi e China. Ukulandela inqubomgomo izinga lokuqala, onjiniyela bethu abanolwazi kule ndawo iminyaka engaphezu 10 iminyaka isungule futhi iqaliswe izinga esiqinile management system kanye nokusebenzisa artcraft ekhethekile ukwanelisa izimfuno ezikhethekile.
Ukunamathela ifilosofi zebhizinisi win win nokubambisana, pragmatism nemibono emisha nokuphishekela ubuhle, WEDAC Sizokwenza ukunikeza design professional, imikhiqizo eliphezulu futhi inkonzo okucabangela. Eminyakeni engaphezu kwengu-10, imikhiqizo yethu akhishwe e-Australia, eJapane, e-USA kanti amazwe aseYurophu futhi siye kufezeke amaphrojekthi amaningi amaklayenti zaphesheya ezivela ezindaweni ezahlukene. WEDAC efisa ukuqala ubuhlobo umlingani namakhasimende kokubili ekhaya aphesheya, futhi ngokuhlanganyela ukudala imbangela enkulu.
singamalungu nomkhiqizi ezikhethekile design, ukuthuthukisa kanye esikhiqiza iimfesi esitolo ukubonisa imishini zezinhlobo ezahlukene ezindaweni ezihlanganisa yezimonyo, ezempilo Ande-ugwayi izimboni.
Ifoni: + 86-574-87282738
Ifeksi: + 86-574-87282316
Enza ngendlela oyifisayo Umkhiqizo wakho